Kedu ihe kpatara iji ejima dijitalụ na-ewu ihe - Geofumadas
Machị, 2019 Engineering, innovations
Ihe niile gbara anyị gburugburu na-aghọ dijitalụ. Advanced teknụzụ dị ka wuru ọgụgụ isi na Internet Ihe (IoT) na-aghọ esiwanye mkpa akụkụ nke ọ bụla ụlọ ọrụ, na-eme usoro ngwa ngwa na ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma na okwu nke na-eri, oge na traceability. Ịga na dijitalụ na-ekwe ka ụlọ ọrụ ọ bụla nweta ihe na-erughi; dịkarịa ala a na-ezo njikarịcha achọ ọhụrụ ọganihu Mgbakọ ike na ọgụgụ isi algọridim, tinyere nkà na ụzụ ndị na na sensọ, miniaturization, robotics na drones, ha na-enyere ọbụna ndị na-ewu ụlọ ọrụ na-aghọta otú ha nwere ike ikpokọta ndị dijitalụ na nke anụ ahụ na-ewu ụlọ dị ọnụ ala karịa, na-adịkwu ndụ na nchebe karịa obere oge.
Ihe omuma atu nke a bu otu ndi drones si ekwe ka ndi mmadu nweta otutu ndi mmadu foto n'ime obere oge, na-eme ka atumatu oru a di nfe. Mana ọ bụghị naanị nke ahụ, ebe ọ bụ na ọ dabere na ihe mmetụta nke drone nwere, enwere ike nweta data n'otu oge ahụ nke nwere ike ịhazi ụdị anụ ahụ nke na-enye uru dị ukwuu na foto foto dị mmiri mmiri. Echiche a nke na-agbanwe ihu nke ụlọ ọrụ AEC bụ nke "Digital Twins" na ihe atụ ndị na-adịbeghị anya nke eziokwu gbakwunyere site na Hololens2 na-egosi na anyị ga-enwe ọtụtụ n'ime nke a karịa ụlọ ọrụ ntụrụndụ.
Dabere na akụkọ Gartner na-adịbeghị anya, usoro "Digital Twin" na-eru nso "Oke atụmanya." Kedu ihe ọzọ? N'ime afọ 5 ruo 10, atụmanya ga-eru “Plateau Plateau”.
Ụzọ mgbapụ Gartner maka teknụzụ ndị na-apụta na 2018
Kedu ihe ejima dijitalụ?
Otu ejima ejiri na-ezo aka na ihe nlereanya nke usoro, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Otu ejima ejiri na-ejikọta ihe dị n'etiti ihe na-eme n'ụwa na njirimara dijitalụ ya nke na-eji data nyocha. Ihe niile data sitere na ihe mmetụta dị na ihe anụ ahụ. A na-ejizi ntanetị dijitalụ mee ihe maka nlele, nṅomi, nyocha, nkwekọrịta na atụmatụ ọzọ.
N'adịghị ka ịme ngosi uwe BIM, ejima dijitalụ anaghị arụ ọrụ ihe gbasara spatially. Dịka ọmụmaatụ, usoro azụmahịa, faịlụ nke mmadụ, ma ọ bụ usoro mmekọrịta dị n'etiti ndị nwere oke na ngalaba nhazi.
N'ezie, ejima dijitalụ nke ihe eji arụ ọrụ bụ nke kachasị mma, opekata mpe na ngalaba Geo-engineering. Site na ịmepụta ejima dijitalụ nke ụlọ, ndị nwe ụlọ na ndị ọrụ nwere ike igbochi nsogbu dịgasị iche iche na-eme n'ime ụlọ ahụ, ịnakwere atụmatụ iwu, wee nwee ụlọ nchekwa. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta ejima dijitalụ nke ụlọ ma chọpụta otú ọ ga-esi meghachi omume na nnukwu ala ọma jijiji. Dabere na nsonaazụ ya, ị nwere ike ime mgbanwe ndị dị mkpa na ụlọ ahụ, tupu ọdachi ahụ amalite na ihe gafere aka. Nke a bụ otu ejima dijitalụ nke ụlọ nwere ike isi zọpụta ndụ.
Foto ngosi nke: buildingSMARTIn Summit 2019
Ndị ejiri ejiri dijitalụ kwere ka onye na-ewu ụlọ wuo ozi niile metụtara ụlọ dị na ozugbo, jikọtara na faịlụ ndụ nke na-agụnye imepụta, imewe, iwu, ịkwado na ọrụ nke akụ. Ọ na-enye ohere ntinye aka na ihe niile gbasara ụlọ ọrụ. Ọ na-enyere ndị na-ewu ụlọ aka mgbe niile na ọbụna ihe ndị dị ntakịrị, dị ka ihe ndị a chọrọ n'aka nke ọkụ.
Dika Mark Enzer, CTO, MottMacDonald keere na nso nso a na ulo SMARTIn Summit 2019, na-ekwu maka ugboro nke mmelite dijitalụ dijitalụ; "Ọ bụghị banyere oge, kama ọ bụ maka oge kwesịrị ekwesị."
Uru nke iji ejima ejiri rụọ ọrụ.
Ezi ojiji nke teknụzụ na-eme ka arụmọrụ dị irè karị. Dịka ọmụmaatụ, ejima dijitalụ, site n'ikwe ka nkedo nwee ike iburu mmebi nke ọdachi na-eme na mmadụ. Ha nwere ike inyere ụmụ amaala aka ibi ndụ dị nchebe. Dịka ọmụmaatụ, maka ọnọdụ ebe e kwesiri ịbụ ọtụtụ okporo ụzọ, site n'iji ngwanrọ simulation simulator, anyị nwere ike ịkọ oge na ebe a ga-enwekwu mgbakọ. Site n'inweta mgbanwe dị mkpa na ụdị ihe omimi nke akụrụngwa, ọ ga-ekwe omume iji nweta nchebe, arụmọrụ na ụgwọ ọrụ nchịkwa dị ukwuu n'iwu na nhazi nke akụnụba.
Uru nke iji ejima ejiri rụọ ọrụ dị ọtụtụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ nkọwa zuru ezu n'okpuru:
Nyocha na-aga n'ihu na-enwe ọganihu.
Nlekọta anya nke ebe a na-ewu ụlọ site na ejima dijitalụ na-ekwenye na ọrụ a rụzuru na-akwado atụmatụ na nkọwa. Na ejima dijitalụ, ọ ga-ekwe omume iji gbanwee mgbanwe na ihe nlereanya dịka a na-ewu ya, kwa ụbọchị na oge awa, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla gbawara, a ga-eme ihe ozugbo. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ike igosi na ọnọdụ nke ihe ahụ, mgbagwoju anya na ogidi ma ọ bụ ihe ọ bụla nke ihe onwunwe na saịtị ahụ na-arụ ọrụ nwere ike igosi na ejima dijital. Nchọpụta dị otú a na-eduga nyocha na nhụsianya ndị ọzọ ngwa ngwa, na-eduga ngwọta dị irè karị.
Jiri ezigbo ego mee ihe.
Digital twins ọbụna na-eduga n'inwekwu ego nke akụ na ụba na ụlọ ọrụ enyemaka na-ezere oge na-arụ ọrụ na mmegharị na ijizi ihe ndị na-adịghị mkpa. Site n'iji teknụzụ a eme ihe, enwere ike izere oke oke na ọ dịkwa mfe ịkọwapụta ihe dị mkpa na saịtị ahụ.
Ọbụna eji ngwá ọrụ ahụ nwere ike ịdebe na enweghi ike iji tọhapụ ndị ọrụ ọzọ. Nke a na-azọpụta oge na ego.
Nchedo bụ nchegbu dị ukwuu na saịtị nwube. Ụmụ ejima abụọ, site na ikwe ka ụlọ ọrụ na-eso ndị mmadụ na ebe ndị dị ize ndụ na saịtị nwube, nyere aka zere iji ihe na-adịghị ize ndụ na ihe omume na mpaghara ndị dị ize ndụ. Dabere na ozi oge, a pụrụ ịmepụta usoro nkwupụta mmalite nke na-enye ohere ka onye na-ewu ụlọ mara mgbe onye ọrụ ubi nọ na mpaghara na-adịghị ize ndụ. Enwere ike iziga ọkwa maka ngwaọrụ mkpanaka nke onye ọrụ iji gbochie ihe ize ndụ site na ime.
Ihe ndị bara uru n'iji igwe ejiji ejima ejiri rụọ ọrụ na-ewu ewu. Omume ochie bụ ihe siri ike, ma iji mezuo arụmọrụ ka ukwuu, ọ dị mkpa ịga dijitalụ. Njikere nke ejima dijitalụ nwere ike iweta nnukwu ihe ohuru na mmepe nke akụrụngwa ma weta mma na ike na elu. Ụlọ ọrụ ndị ahụ aghaghị ịkwado na ime mgbanwe maka ọnọdụ na-agbanwe agbanwe dijitalụ!
Ihe atụ nke ya
Anyị nwere ohere ịjụ ndị ọrụ ibe anyị Brazil afọ gara aga, na London. Site na iji ejima dijitalụ, Brazil Governador José Richa Airport (SBLO), ọdụ ụgbọ elu nke anọ kachasị na ndịda Brazil nwere ike ijikwa data ọdụ ụgbọ elu ma nweta arụmọrụ ka ukwuu na arụmọrụ ya.
N'ịchọrọ na ọ dị mkpa ịhazi ọdụ ụgbọ elu, SBLO n'ọdụ ụgbọelu, Infraero kpebiri ịmepụta ejima dijitalụ nke ga-eme ka ọ bụrụ ihe dị adị na ebe nchekwa maka ọdụ ụgbọelu niile, gụnyere ihe ndị ọzọ, ụlọ, usoro ụlọ , ụlọ ọrụ na map na njikwa data.
Ejiri BIM na GIS tinyere ngwa Bentley iji gosipụta ụlọ ọrụ 20 dị ugbu a, nke na-ekpuchi karịa mita 920,000 nke ọdụ ụgbọ elu. Ha na-ejikwa ụgbọ mmiri na-asọpụ, na-agafe agafe na ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ụzọ okporo ụzọ. Onye oru ngo ahụ wee mepụta nchekwa data iji kwado atụmatụ ma melite oru ngo.
Ndi oru oru ngo a meputara ejima dijitalya nke n'ọdụ ụgbọ elu nke na-agụnye nyocha ihu igwe na ọdụ ụgbọ mmiri na ebe nchekwa nchekwa maka ọdụ ụgbọelu niile. Nchekwa nke etiti na-enyere ndị ọrụ aka ịmata ọnọdụ nke usoro dị n'ime ọdụ ụgbọ elu, rụọ ọrụ njikwa azụmahịa na arụmọrụ na nchekwa. Igwe ejiri dijital ga-agbanyekwa usoro ihe omumu oru uzo di n'ime ya, tinyere usoro nhazi na oru. Site n'enyemaka nke ejima ejiri dijitalụ, Infraero nwere ike belata mmefu ụlọ ọrụ ma mezuo ọdụ ụgbọ elu dị elu na SBLO. Onye oru ngo a na-acho icheputa karia BRL 559,000 kwa afo ya na ejima dijitalya. Nzukọ ahụ na-atụ anya ịhụ mmụba na uru ya.
Ejila software eji
Ejiri ProjectWise kee ikpo okwu ọdụ ụgbọelu, nke jere ozi dị ka ebe data data jikọtara na ọrụ ahụ. Ike nke mbubata nke igwe ojii MicroStation kwere ka otu ahụ nwee ike ịmepụta ebe niile n'ọdụ ụgbọ elu na-eji ígwé ojii eme ihe. OpenBuildings Designer (nke a na-emepụta AECOsim Building Designer) nyeere aka ịhazi na ịhazi ọbá akwụkwọ nke ọdụ ụgbọ elu, yana ịṅomi ndị njem, ndị na-ebu ibu, ụlọ ọkụ na ụlọ ndị ọzọ dị. Ndị otu ahụ jiri OpenRoads rụọ ọrụ atụmatụ geometric na ala map nke usoro ọsọ ọsọ maka ụzọ ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ na ụzọ ụzọ.
Previous Post«Previous Oracle bụ onye nkwado na-elekọta ya na 2019 World Geospatial Forum
Next Post #GeospatialByDefault - Nzukọ Geospatial 2019Next »